WAAN BAAHANAHAY BAKHTIGA LOOMA CUNO! – Maandoon
May 18, 2017 Abdi J Arab 0 Comment
Tan iyo dhamaadkii dagaalkii qaboobaa (the cold war) ee u dhexeeyay reer Bariga iyo reer Galbeedka ama Xulufada Nato iyo Xulufada Warso oo ey kala hogaaminayeen quwadaha Mareykanka iyo Ruushku, waxaa Afrika ku soo badanayay soo rogaal celinta boobka khayraadka qaaradda duxan ee bikrada ah. Waxaa waayadii hore horumood ka ahaa boobka khayraadka Afrika waddamada reer Galbeedka sida Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska, Boortaqiiska iyo Biljamka. Haatan waxaa gulufkaas ku soo biiray waddamo iskaa wax u qabso ku shaqa geliya waddamada Afrika oo garab rarato ah, oo iyagu hadda ugu badan kuwa khayraadkaas boobaya.
← Islaamka siyaasiga ah iyo dhagarta taariikhda!
Wahaabiyada, Riyaalka Sucuudiga iyo Siyaasadda Maraykanka →